Sarudza Yakanakisa Kudzora Kwevabereki Kunyora Mameseji App mukati meMinuti
2 ago 1 mwedzi kare
by SND Team 2 ago 1 mwedzi kare
Nevana vaduku semakore mashanu ekuberekwa kuwana mafoni efoni, kuvasiya vari voga nefoni dzavo zvinogona kuva nengozi. Kubva pacyber-bullying kusvika ku phishing kusvika kune mameseji akajeka, kune zvakawanda zvekutyisidzira kunze uko. Ichi ndicho chikonzero chero chevabereki kutonga mameseji app iri godsend. Saka, kana iwe uchitsvaga app yekutarisa zvinyorwa zvemwana, ramba uchiverenga.
Sei Uchifanira Kutarisa Zvinyorwa Zvevana Vako?
Kunyange zvinganzwa kutyora zvishoma kuverenga zvinyorwa zvevana vako, kutonga kudiki kwevabereki kunoruramiswa zvachose kana vana vako vachiri vadiki uye vari panjodzi. Kutariswa kwemeseji yevabereki kwakakosha, kunyanya kuvana vadiki. Vanogona kunge vari kutambisa nguva yakawandisa kutumira mameseji kushamwari kana kutaura nevanhu vavasingazivi vanogona kuvakuvadza. Hazvishamisi kuti unoda kuziva "kuronda foni yemwana wangu vasingazive kure” sezvaunoda kuti vana vako vachengetedzeke online.
Chimwe chezvinonyanya kunetsa vabereki vangangove vachitsvaga mubereki meseji yekutarisa kutumira mameseji kana kupanana nudes. Kupanana mifananidzo inonyadzisira kunogona kukuvadza, uye hazvisi pamutemo kuti vadiki vadaro. Pazera diki, vana havana njere, uye vanogona kuvimba nevanhu vasingareve zvakanaka nekushama kwavo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, nhungamiro yevabereki inokosha.
Mwana wako anogona kunge ari kutumira mameseji vanhu vausingazive zvakare. Kunyanya neinternet, zvikara zvakawanda zvinokuvadza zviri kunze uko zvinoda kudzidzisa vana vadiki. Semwana mudiki, zviri nyore kuwira mumisungo iyi. Kunyange zvinganzwa zvisingakuvadzi kumwana, mubereki anogona kuona zviri nyore kana chimwe chinhu chiri hove.
Saka, kudzivirira vana vako kubva pakuita chimwe chinhu chavangademba, zvakakosha kuti utarise kuti vari kutumira mameseji ndiani uye kuti ndeapi mameseji avanochinjana.
Epamusoro mashanu Akanyanya Mapurogiramu eVabereki ekutarisa Zvinyorwa
Lucky kwauri, kune ikozvino matani emaapps kunze uko anogona kukubatsira ne meseji yekutarisa meseji. Zvizhinji zveizvi incognito zvakare, saka mwana wako haazowaniwo mukana wekunyunyuta. Heano epamusoro 5!
Iyo eyeZy app ndiyo imwe nzira yakanaka yekutarisa mameseji emwana wako. Zvinokutendera kuti utarise vavanobatika, ona kuti ndiani wavari kutumira mameseji, uye tarisa pasocial media mameseji mameseji uye maemail. Iine eyeZy's skrini yekurekodha basa, unogona kuongorora chiitiko chavo pafoni yavo munguva chaiyo!
Contacts uye kuwana foni
Tarisa mameseji akadzimwa
Zvinogona kunge zvichinetsa kugadzirisa
mSpy chinhu chikuru Anwendung unobvumira kuti utarise zvose vana vako mashoko. Kunyangwe kubva pamameseji efoni kana kushandisa mamwe mameseji mameseji akabatana nesocial media, unogona kuzvitarisa ese. Uye chikamu chakanakisa ndechekuti, vana vako havatomboziva!
Vhara mameseji mapurogiramu
Ona mapikicha akachinjana
Gamuchira zviziviso uye zviziviso
Inogona kusashanda pamafoni ekare
NaBark, unogona kuchengeta mameseji emwana wako pafoni yake uye kutarisa kana paine ari kuvadheerera, kugumbuka kana kusuwa, kutaura nezvezvinodhaka kana doro, nezvimwe zvakawanda. Bark inozivikanwa kubatsira kudzivirira mamiriro ezvinhu apo vana vako vangave vachizvikuvadza ivo pachavo. Shandisa Bark kutarisa maitiro emwana wako.
Haasi ese zvirongwa zvinotsigira mavara ekutarisa
iOS uye Android rutsigiro
Inoshanda kune ese akajairwa meseji mameseji
Zvinogona kunetsa kumisikidza pane iOS zvishandiso
Haiwanikwe kunze kweUS
Iwe unogona kushandisa Mobistealth kutarisa SMS yemwana wako uye mafoni uye kutarisa kwaanogara. Iyo inokupa iwe kupinda kune yavo mutumwa hurukuro, Snapchat zvinyorwa, Whatsapp uye Skype, uye Viber. Panewo keylogging ficha kuti ikubatsire kuona zvavari kutaipa.
Svika mafoto nemavhidhiyo zvakatsinhaniswa
Yakanakira Android zvishandiso
Ese maficha haana iOS rutsigiro
Izvo hazvikupi iwe kuwana kune Instagram zvinyorwa
Cocospy iapp inokubvumira kuti utarise hurukuro dzemwana wako pamaapuro mashanu akasiyana uye yenguva dzose yekutumira mameseji parunhare. Unogona kutarisa FB mameseji, WhatsApp, Snapchat, Instagram, uye Viber mameseji.
Tarisa zvinyorwa zvakadzimwa
Tora zviziviso zveGeofence
The Anwendung anofanira kuiswa pamusoro chipfuro mudziyo
Hapana keylogging maficha
Iyo haitsigire ese mameseji mameseji
Zvino zvawaenda pamusoro pedzimwe dzezvakanakisa sarudzo kunze uko maererano nevabereki kutonga mameseji mameseji, unogona kuzvisarudzira iwe waunoda zvakanyanya. Kunyange zvakakosha kudzivirira vana vako kubva pakutyisidzirwa, yeuka kusapfuura. Dzidzisa vana vako kuti vavimbe newe uye vakuzivise zvavari kuita.
by SND Team 8 maawa apfuura 5 maawa apfuura